बिगुल न्यूज - ST, Author at बिगुल न्यूज | Page 179 of 180
पुष १६, २०७४ बिगुल न्यूज - ST
(एजेन्सी) भनिन्छ, केटि मान्छेको रुद्रघन्टी हुँदैन,यसो भन्नुको अर्थ महिलाहरु कुनै पनि कुरालाई लामो समयसम्म मनमा राख्न सक्दैनन् । ‘अरु कसैलाई नभन्नु नि है !’ भनेर कसैले सुनाएको कुरा उनीहरुले कोही न …
दुनियाका यी ९ देश, जहाँ सजिलै जो कोहिले पनि नागरिकता लिन सक्छ !
एजेन्सी – आफुलाई मनपर्ने ठाउँमा बस्ने रहर संसारको सबै मानिसलाई हुन्छ । आफुले चाहेको ठाउँमा सजिलै नागरिकता पाउने ईच्छा सबैले राखेको हुन्छ । तर आफुले भनेजस्तो कहाँ हुन्छ र ? …
जेल भित्र पस्नै लागेको परेवालाई प्रहरीले गोली हानी मारेपछि खुल्यो यस्तो रहस्य
एजेन्सी, अर्जेन्टिनामा यस्तो घटना घटेको छ जुन सुन्दा जो किहोलाई अनौठो लाग्ने गर्दछ। अर्जेन्टिनाको एक जेलमा बस्ने जेलर र कर्मचारीका सुराकीको आधारमा परेवाले लागुऔषध बोकेर जेलभित्र पुर्‍याउने गरेको थाहा पाएपछि उक्त परेवालाई गोलि हानी …
जनावरबाट हामी मानिसहरुले सिक्नु पर्ने २० कुरा – चाण्ड्क्य
बिगुल संवाददाता, काठमाडौँ । चाण्क्य वा कौटिल्यको नामले चिनिने महान बिद्धान्, तक्षशिलाका आचार्य, दार्शनिक एबं महान सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यका सल्लाहकार थिए । उनको जन्म : लगभग ई.पू. ३७०–२८३ मा भएको …
कस्तो सपनाको प्रतिफल कस्तो हुन्छ ?
काठमाडौँ । दिनभरको थकानबाट बिश्राम पाउनका लागि मानिसहरुलाई मात्र नभई हरेक प्राणिलाई निद्रा जरुरी हुन्छ । निदाईसकेपछी बिभिन्न प्रकारका सपनाहरु देख्ने गरिन्छ । सपना सबैले देख्छन् तर फरक यती हो …
यसरी तस्बिरमा जस्तै बुढी औँलाले कान्छी औँला छुनुस्, यदि तपाईको टेण्डन देखियो भने सम्झनुस् यस्तो बिशेष हुन्छ!
प्राचिन कालदेखि आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा यस्तो छ मानिसको शारीरिक सरंचना एजेन्सी – विशेषज्ञका अनुसार मानव जीवनको विकासक्रम धेरै वर्ष अगाडिदेखि हुदैं आइरहेको छ । र यसको विकाससँगै भएका साना परिवर्तनहरुले …
सामसङको ईयरफोन नक्कली र सक्कली कसरी छुट्याउने ?
काठमाडौं । सामसङको सक्कली ईयरफोन लगभग ६ सय ५० रुपैयाँमा पाईन्छ । त्यहि ईयरफोन १ सय ५० वा २ सय रुपैयाँमा पनि पाइरहेको हुन्छ । पैसा बचाउने लोभमा कतै नक्कली …
कपालको लागि बरदान ‘भिण्डी’, यसरी घामले डडेको छालालाई पनि पर्छ ‘चमकदार गोरो’
एजेन्सी – हामीले तरकारीको रुपमा प्रयोग गर्ने भिंडिले छाला र कपालसम्बन्धि धेरै समस्याबाट छुट्कारा दिलाउँछ । जस्तै ः ड्राई स्किन , स्किन इन्फेक्शन , कालो छाला, डेंड्रफ आदि । भिंडिको …
करेला खान जाने अमृत खान नजाने विष, थाह पाउनुहोस बेफाईदाहरु !!!
बिगुल स्वास्थ्य, काठमाडौँ । कतिपय रोगहरुको औषधी भनेर तितो करेलालाई मान्न सकिन्छ तर कतिपय यस्ता रोगहरु हुन्छ जुन रोगका लागि करेला खानु त्यति उचित मानिदैन । कलेला कतिपयलाई अमृत साबित …
यौनक्षमता बढाउने ३ जडीबुटी (आयुर्वेदिक उपाए)
नेपालीमा काउछो भनेर चिनिने यो जडीबुटीको वैज्ञानिक नाम मक्युना प्रुरिन्स हो । संस्कृतमा यसलाई कपिकच्छु या आत्मगुप्ता भनिन्छ । नेपालको तराईदेखि चार हजार पाँच सय फिटसम्मको उचाइ भएको पहाडी क्षेत्रमा …